विद्यार्थी भन्छन् : विद्यालय हो कि धर्मशाला ? - The Public Today
विद्यार्थी भन्छन् : विद्यालय हो कि धर्मशाला ?
जनता मा.वि. डाँडाटोल बिजलपुराको लाईभ
१० पुष २०७६, बिहीबार ०४:३०
समयमा न शिक्षक आउँछन् न त विद्यार्थी । कार्यालय सहयोगी भने टाइममै कार्यालयको ताल्चा खोल्छन् र समय तालिका अनुसार घण्टी पनि लाउँछन् । तर, शिक्षक पढाउन जान ढिलो गर्छन् । यस्तै हालत छ, २०१६ सालमा स्थान भएको महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१३ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय डाँडाटोल बिजलपुराको ।
‘द पब्लिक टुडे’को टोली विद्यालयको दैनिक गतिविधि नियालन मंगलबार स्कूल पुगेका थियौं । स्कूल खुल्ने समयदेखि बन्द हुने समयसम्म बसेर अवलोकन ग¥यौं ।
बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ः३५ बजे सम्मको समयलाई विद्यालय संचालनको समय छ । विद्यालय समयमा हामी विद्यालय पुग्दा कक्षा कोठा फोहोर मात्रै होइन्, स्कूल परिषर गाँजा, चुरोट, रक्सी र दिसापिसाब गर्ने अड्डा नै बनाएको पायौं ।
विद्यालयको शैक्षक अवस्था दैनिय रहेको विद्यार्थीहरुले गुणसो पोखे । शौचालय दुर्गन्धित रहेको पाइयो । छात्रालाई सितैमा सरकारले उपलब्ध गराएको सिनेट्री प्याड विद्यालयमा छैन । प्याड अभावले महिनाबारी हुँदा महिनामा पाँच दिन स्कूल छोड्न बाध्य हुनु परेको छात्राहरुले एकै स्वरमा दुःख सुनाए । स्कूल परिषरमा इनार र बोडिङ्ग छ तर, विद्यार्थीहरुले सहज रुपमा पिउने पानी पाउदैंनन् ।
जनता माध्यमिक विद्यालयको हेडमास्टर भरत प्रसाद यादव छन् । उनी नेपाली कांग्रेस महोत्तरी नजिकका शिक्षकहरुको नेता पनि हुन् । नेपाल शिक्षक संगठन महोत्तरीका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षक नेताको स्कूलकै शिक्षक क्रियाकलापप्रति विद्यार्थीले प्रश्न उठाए, स्थानीयले आक्रोस पोखे । स्थानीय सरकारले विद्यालयमा चासो नदिएको पनि सुनियो ।
सुरुमै भद्रगोल देखियो
बिहान १०ः२० मिनेट जाँदा प्रार्थना घण्टी लाग्यो । तब सम्मा चार–पाँच जना शिक्षक हाजिर गरिसकेका थिए । सात जना शिक्षक र मुसकिलले तीन विद्यार्थीले राष्टगान गाएर प्रार्थना गरे । केही भए जस्तै विद्यार्थीहरु प्रार्थनाको लाइनबाट भागदौड गरेर चौरभरी छरिए । शिक्षकहरुको कोही पनि बोलेनन्, कक्षा कोठामा जानु पर्ने विद्यार्थी चौरभरी छरिएर खेल्न थाले । कक्षा सुरुवातीमै भद्रगोलले प्रवेश पायो । एक हजार विद्यार्थी रहेको स्कूलमा धेरै विद्यार्थी समयमा आएनन्, शिक्षक पनि विद्यालय समयमा नआउने सिको गरेको देखियो ।
पठनपाठनका लागि १०ः३० मिनेटमा टिङ्ग पहिलो घण्टी लाग्यो । एक दुई शिक्षक बाहेक अरु शिक्षक घण्टीले गरेको जानकारीलाई वास्तना गरेनन् । कोही पाँच मिनेट त कोही १५मिनेट कोही पहिलो घण्टी लागेको २५ मिनेट लागेपछि कक्षा कोठा भित्र पसेको देखियो । शिक्षक कक्षामा पसे पनि विद्यार्थीहरु चौरमै खेलिरहे । पहिलो घण्टीको र दोस्रो घण्टीको सुरु हुने बेलासम्मा शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालयमा आउने क्रम चलिरह्यो ।
बिहान १०ः४१ मिनेट जाँदा शिक्षिक ममता काफ्ले पढाउनु पर्ने कक्षामा विद्यार्थी उनको प्रतिक्षा गरिरहेको भेटियो । प्रधानाध्यापकले स्कुटी पम्चर भएर आउन ढिलो भएको जानकारी दिए । शिक्षिका लालगढबाट पढाउन दैनिक डाँडाटोल बिजलपुरा आउँछिन् ।
२२ मिनेट ढिलो शिक्षकको इन्ट्री
१०ः४५ मिनेटमा हामी कक्षा ११ को बाणिज्य संकाय पढाइ हुने कक्षामा पुग्यौं । त्यहाँ सात जना विद्यार्थी भेटिए । १०ः३० बजे कक्षामा भेटिनु पर्ने शिक्षक विनोद यादवको १०ः४८ सम्म पनि अतोपत्तो थिएन । घडीमा बिहान १०ः५२ मिनेट हुँदा मात्रै उनी कक्षा कोठाको गेटमा देखा परेका थिए । ४५ मिनेटको घण्टीमा उनी २२ मिनेट ढिलो गरि पुगेका थिए ।
क्यामरा तेस्राएर संचारकर्मीको टोली उनको प्रतिक्षामा बसेको देखेपछि उनी कक्षा कोठाको गेटमा अक्कनबक्क भए । आफूभन्दा अगाडी पत्रकारहरुलाई कक्षा कोठामा पसेको देखेपछि लाजले शिक्षक कक्षा कोठामा पसेनन् । निजी कामले ढिलो भएको जवाफ शिक्षक यादवले दिए । कक्षा कोठाबाट हामी निस्किएपछि शिक्षक पसे ।
शिक्षक सरुवा हुँदा पठनपाठन प्रभावित
११ः१० बजे जाँदा हामी कक्षा १० मा पस्यौं । जहाँ विज्ञान बिषय पढाई भइरहेको थियो ।कक्षाका विद्यार्थी बिजय महतो भने,‘ समाजिक, स्वास्थ्य र विज्ञान राम्रो पढाइ भएको छैन । शिक्षक अभावमा शिक्षक भोजराज साहले पढाइरहनु भएको छ । समाजिक र स्वास्थ्य बिषय हेडसरले पढाउनुहुन्छ, त्यो पनि महिनामा १० दिन मुश्किलले मात्रै हुन्छ । शिक्षक सरुवा भएर गए । तर, त्यस ठाउँमा नयाँ शिक्षक नआउँदा बर्षदिनदेखि कक्षा १० विद्यार्थीले समाजिक र स्वास्थ्य बिषय राम्रोसंग पढ्न पाइरहका छैनन् ।
विद्यालय हो कि धर्मशाला ?
विद्यालयमा के समस्या छ ? भनेर प्रश्न गर्दा विद्यार्थीहरुले संचारकर्मीलाई भने,‘पढाई हुदैंन । शिक्षक १० बजे आउँछन्, शिक्षक ११ बजे आउँछन्, स्कूलमा कुनै नियम कानुन छैन । शौचालय दुर्गन्धित छ । खानेपानी चाहेको बेला खानपाउदैंनौं ।’ के यो विद्यालय हो कि धर्मशाला हो ? प्रश्न गर्दै उनीहरुले भने,‘यो विद्यालय होइन् बास्तवमै धर्मशाला हो ।’शिक्षकले विद्यार्थीसंग मतलब नै राख्दैन ।
छात्राका लागि छैन, सेनेटरी प्याड
कक्षा १० की भानु चौधरीले भनिन्, ‘महिला र पुरुष शौचालय व्यवस्थापन गरिएको छैन । विद्यालयमा प्याड छैन । महिनावारी हुँदा पढाई छोडेर घर जानुपर्छ । विद्यालयमा बस्न सक्दैनौं । महिनामा पाँच दिन स्कूल छोड्नु पर्छ ।’
कक्षा १० कै छात्र अनिल कुमार महतोले स्कूलमा राम्रोसंग पढाई हुदैंन । हामी मिटिङ्ग राख्न हेडसरलाई भन्छौं । तर, हेडसरले पनि हाम्रो कुरा सुन्नहुन्न । वडाअध्यक्ष श्याम राउतलाई भन्दा उहाँले पनि हाम्रो कुरो सुनवाई गर्नु हुन्न् । ११ः१५ बज्दा विद्यार्थीहरुले विद्यालयको शौचालयको अवस्था हेरिदिन हामीलाई अनुरोध गरे । हामी शौचालय पुग्दा दुर्गन्धले नाक छोप्नु पर्ने भयो । दिसापिसाब जहि तही गरिएको थियो । विद्यार्थीहरुले माक्स लगाएर हामीलाई शौचालयको स्थालगत जानकारी गराए ।
नाम सरकारीमा, पढाई बोडिङ्ग तिर
शौचालयको दुर्दशा हेरिनसक्नु थियो । त्यसपछि हामी कक्षा १ मा पुग्यो । घडीमा ११ः ४० बजिसकेको थियो । ४५ जना विद्यार्थी मध्य कक्षा १ मा मंगलबार २० जना मात्र उपस्थित थिए । कक्षा विद्यार्थी अनवत नदाफले भने,‘ सरकारी स्कूलमा नाम लेखाउँछन्, पढ्न बोडिङ्ग स्कूलमा जान्छन्, परिक्षाको बेला उनीहरु सरकारी स्कूलमै आउँछन् ।’
११ः४९ मिनेट जाँदा हामी कक्षा ४ मा पुग्यौं । शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाइरहेका थिए । ४७ जनामा २३ जना उपस्थित थिए, कक्षामा ।
विद्यार्थी र शिक्षकमा अनुशासनको कमी
मध्यान्न १२ः०० बजेट दोस्रो घण्टी सकेर तेस्रो घण्टी लाग्यो । दोस्रो घण्टी पढाएर शिक्षक निस्किएछि उनीहरुसंग विद्यार्थीहरु हुलबाँधेर निस्किए । शिक्षक कक्षामा पसेर विद्यार्थी चौरबा कक्षामा जाने र पढाएर निस्किर बाहिरिने क्रमले दोहोरिनै रह्यो । न शिक्षक अनुशासित देखियो, न त शिक्षकले विद्यार्थीहरुलाई अनुशासनको पाठ सिकाएको पाइयो ।
तेस्रो घण्टी संगै हाम्रो नजर एक शिक्षकमाथि प¥यो । रामअनेक यादव नाम गरेका शिक्षक स्कूलमै बस्छन् । कक्षामा ढिला गएर उनी घाममा लुगा सुकाउने मस्त देखिए । स्कूलमा क्वाट लिएर बस्ने शिक्षकहरुले भित्री बस्त्र(अन्दरपेन्ट ) स्कूल प्राङ्गणै सुकाएको देखियो ।
हेडसर पढाउन गएनन्
कक्षा ९ मा तेस्रो घण्टी हेडसर भरतप्रसाद यादवको थियो । पढाउनु पर्ने बिषय थियो, जनसंख्या वातावरण । हेडसर स्कूलमै रहँदा पनि पढाउन कक्षा पसेनन् । उनले भने,‘स्कूलको प्रशासनिक काममा व्यस्त हुँदा कक्षामा पढाउन समय भियाएनन् ।’तेस्रो घण्टी पनि सक्यो । कार्यालय सहयोगीले चौथौं घण्टी बजाए । शिक्षकहरु अल्छिमानेर कक्षामा प्रवेश गरे । लाग्थ्यो, पढाउन नपाए हुन्थ्यो ।
टिफिनमै विद्यार्थी घर हिडे
२ः०० बजे टिफिन घण्टी लाग्यो, टिफिनले बच्चाहरुमा खुसियाली थपेकों कक्षाबाट निस्किएको अवाजले हामीलाई भान गरायो । कक्षा पाँच सम्मका बालबालिकाहरुका दिवाखजा खान प्लेट लिएर अघि बढे । खिचडी खाएर अघाए । निकै कम संख्यामा बच्चाहरु कक्षा भित्र पेसे, धेरै किताब लिएर घरतिर लागे । माथिल्ला कक्षाका पनि स्कूलको गेट हुदैं २ः३० नहुँदै लागि सकेका थिए । घर हिडेका विद्यार्थीलाई रोकेनन् । बरु टुलुटुलु हेरिरहे ।
३ः०० बजे कक्षा चारमा पुग्दा सुनसान थियो । बिहान ११ः४९ बजे पुग्दा हामीले ४७ जना मध्य २३ जना विद्यार्थी पढिरहेका भेटिका थियौं । स्कूल छुट्टी नहुँदै सबै विद्यार्थी निस्किएर घर तिर गएको विद्याथ प्रशासनले पत्तो पाएनन् । छुट्टीको घण्टी लगाएर मंगलबारको पढाई ३ः३५ मा सकियो । माथिल्ला कक्षामा अन्तिम समयसम्म पढाइ भयो ।
समस्याको समाधान गर्छु
जनता माध्यमिक विद्यालयमा एक हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । मंगलबार जम्मा ४९३ जना मात्र उपस्थित रहेको विद्यालय प्रशासनले जनाए । उपस्थित विद्यार्थी मध्ये धेरै कक्षा छोडेर टिफिनमै घर हिडे । शिक्षक अभावमा हेडमास्टरले बिषय शिक्षक नभएका कक्षामा गएर पढाउँछन् । हेडमास्टर प्रशासनिक काममा व्यस्त हुँदा विद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावित हुनेगरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विद्यालयको समस्या चाँडै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।